Tababar ku saabsan ka hortagga Hargabka shimbiraha oo maanta ka furmay Garoowe. – Radio Daljir
Maarso 28, 2010 12:00 b 0
Garowe, Mar 28 – Tababar ay si wadajir ah u soo qabanqaabiyeen wasaaradaha xannaanada xoolaha iyo caafimaadka ayaa maanta ka furmay magaalada Garoowe ee xarunta maamulka Puntland, kaasi oo socondoona muddo dhawr maalmood sida ay shegeen mas’uuliyiinta wasaaradahaasi.
Tababarkaan oo ay ka qaybgalayaan dad aad u tiro badan oo iskugana jira kalkaaliyaal caafimaad iyo dhakaatiir xagga xoolaha ah, ayaa muddada uu socdo lagu baran doonaa waxyaabo badan oo la xiriira caafimaadka dadka iyo duunyadaba, waxaana sigaar ah diiradda loo saarayaa sidii gaashaan iyo garabba looga yeelan lahaa hargabka shimbiraha oo waddamo badan oo adduunka ah saameeyey.
Dr. Khaliif, oo ka tirsan wasaaradda caafimaadka ee dawladda Puntland kaalin weynna kaga jira hirgalinta qorshaha ama mashruuca lagu baranyo sida la iskaga illaaliyo ama loo xakameeyo Hargabka shimbiraha ayaa sheegay qorshaani in uu yahay mid waddamo badan oo dunida ah hadda ka socda, waxaana uu carabka ku dhuftay in ay gacansiinayso labadooda wasaaradood hay’ad midawga afrika ay leeyihiin oo ku xeel-dheer xagga caafimaadka xoolaha.
Hay’adda ku deeqday koorsooyinkaan aqooneed ee la siinyo kalkaaliyaasha caafimaadka ayaa sidoo kale in ka badan 40 waddan oo adduunka ah ka wadda tababarro noocaan oo kale oo ku saabsan sidii loo kordhin lahaa aqoonta bahda caafimaadku ay u leeyihiin cudurka Hargabka shimbiraha.
Furitaankii tababarka maanta waxaa ka soo qaybgalay madax badan oo iskugu jirtay hay’adaha dawladda kuwaasi oo ay ka mid ahaayeen wasiirka caafimaadka iyo wasiir kuxigeennada xannaanada xoolaha, iyagoo goobtaasi ka soo jeediyey khubado ay ka qaybgalayaasha ugu sheegayaan in ay bulshadooda uga faa’ideeyaan waxyabaaha ay tababarkaan ka kororsadaan.
Wasiirka caafimaadka ee dawladda Puntland Dr, Cali C/llaahi Warsame oo ka hadlay kulanka maanta furitaankiisii ayaa sheegay Puntland in ay ka jirto baahi caafimaad oo aad u baaxad weyn loona baahan yahay in lala yimaado dadaal dheeraad ah oo wax looga qabanayo baahida caafimaad.
Wasiirku, waxaa uu jaaliyadaha dibadda ee Puntland ka codsaday in ay gacan ka gaystaan hormarka dalka, awooddana ay saaran baahiyaha bulshada oo caafimaadku ugu horreeyo.
Waa kulankii labaad oo ku saabsan ka hortagga cudarka Hargabka shimbiraha ee lagu qabto Puntland tan iyo markii uu soo baxay ama la helay jiritaanka Hargabka shimbiraha kaasi oo waddamo badan saameeyey.